Maalinta: Maarso 24, 2019
Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sameysay taraamka 4 saacadba kulanka HDP ee Izmit National Will Square ee Kocaeli Metropolitan Municipal, 19 dibadbax ayaa lagu qabtay Izmit National Will Square [More ...]
'Jawaabta Carruurta' Jawaab ka yimid Mısra Oz ilaa TCDD
8 oo ku taal degmada Çorlu ee Tekirdağ Shilkii tareenka ee dhacay July 2018, tareenka rakaabka ah ee ka safraya Kapıkule kuna sii jeeday Istanbul wuxuu u gudbay meel u dhaw Çorlu taasna waxaa ka dhashay ciidda oo hoos u dhacday dariiqyada roobka dartiis. [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Caasimadda waxay ku xireen 7 boosteejo cusub oo baska ah bartamaha magaalada iyo degmada 50. Waaxda Gaadiidka ee Dawladda Hoose ee Magaaladu leedahay ee ku taal xayndaabka warshadaha ayaa bilaabay hawlo ka socda aagagga. Ka shaqeynta Wadada Xariir, [More ...]
Mid ka mid ah laxiriira Degmooyinka Magaalada Kocaeli, GaadiidkaPark A.Ş. Dukaanka dayactirka, qaybo ayuu ka qaataa xoqida, wuu socodsiiyaa oo kaydiyaa qiimaha qaybaha. Waxay soo saartaa matoor marawaxad leh, miisanka dhexe, matoorka matxafka ee Xarunta Xeebta Dayactirka-Dayactirka Dayactirka ee Park Beach. [More ...]
Mid ka mid ah barnaamijyada mobilada ee sida aadka ah loo adeegsado ee Magaalada Caasimadda ah ee Istambul, “IMM White Table yenil waa la cusbooneysiiyay si loo bixiyo adeeg hufan. Nooca cusub ee hawsha xubinnimada waxaa lagu sameyn karaa waqti gaaban. Faahfaahinta codsiyadi hore [More ...]